FAQ - Whoa POS
သင့်ဆိုင်ရဲ့တစ်နေ့တာ အရောင်းစာရင်းကို အတိအကျသိနိုင်ရဲ့လား?
လက်ရှိ Manual သွားနေရတဲ့အခြေအနေမှာ အတိအကျသိနိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ တိကျသေချာ တဲ့ အရောင်းစနစ်တစ်ခုကို အသုံးပြုမှသာလျှင် အရောင်းစာရင်းကို အတိအကျသိနိုင်ပါတယ်။
သင့်ဆိုင်ရဲ့ တစ်နေ့တာအဝယ်စာရင်းကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲ?
မလိုအပ်တဲ့ဝယ်ယူသိုလှောင်မှုတွေမဖြစ်ရလေအောင် Whoa POS အရောင်းစနစ်ကိုအသုံးပြုခြင်း ဖြင့် မိမိဝယ်ယူရမည့်စာရင်းတွေအတိုင်း သေချာစိစစ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
သင့်ဆိုင်မှာတစ်နေ့တာရဲ့ အရောင်းရဆုံးပစ္စည်း၊ ထုတ်ကုန်ကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
ပုံမှန်လက်ရှိအချိန်တွေမှာ မသိနိုင်ပါဘူး၊ whoa POS အရောင်းစနစ်ကို အသုံးပြုပြီး အရောင်းရဆုံး
Product, item စတာတွေကို အတိအကျသိရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Stock လက်ကျန်ကို အတိအကျသိနိုင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
Whoa POS အရောင်းစနစ်မှာ Inventory control System ပါရှိတဲ့အတွက် မိမိဆိုင်မှာရှိတဲ့ item lists အားလုံးရဲ့ stock လက်ကျန်တွေကို တိကျစွာသိရှိနိုင်ပါတယ်။
လက်ထဲမှာရှိတဲ့ ရင်းနှီးငွေကို ဘယ်လိုချိန်တွယ်သုံးစွဲမလဲ?
နေ့စဉ် အရောင်း အဝယ် စာရင်းတွေကို တိကျစွာသိရှိနိုင်တဲ့အတွက် မလိုလားအပ်တဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု တွေကို ရှောင်ကြဉ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ဆိုင်ရဲ့တစ်နေ့တာ ရောင်းရငွေမှ အမြတ်က ဘယ်လောက်လဲ?
Whoa POS မှာ ဝယ်ဈေး ရောင်းဈေးှတွေကို မိမိကိုယ်တိုင် သေချာစွာစိစစ်တွက်ချက်နိုင်တာကြောင့် တစ်နေ့တာ၊ လချုပ်၊ နှစ်ချုပ်တွေရဲ့အမြတ်တွေကိုတွက်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ဆိုင်ရဲ့အရမ်းရောင်းမကောင်းတဲ့ ပစ္စည်းစာရင်းတွေရော အတိအကျသိရဲ့လား?
Whoa POS မှာ နေ့စဉ်အရောင်းစာရင်းတွေကို တိကျစွာတွက်ချက်နိုင်တာကြောင့် အရောင်းရဆုံး စာရင်းနှင့် အရောင်းအဝယ်ထိုင်းတဲ့ပစ္စည်းစာရင်းတွေကို အလွယ်တကူသိရှိနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ဆိုင်မှာ ပျက်ဆီးသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေ ဘယ်လောက်ကုန်ဆုံးသွားသလဲဆိုတာရော ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ? ဒါတွေဟာ သင့်ရဲ့ရင်းနှီးငွေ (သို့) အမြတ်အစွန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
Whoa POS မှာ Inventory Control System အဓိကပါဝင်တာကြောင့် မလိုလားအပ်တဲ့လေလွင့် ပျက်ဆီး ရှိမှု၊ ဆုံးရှုံးမှုတွေကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးနိုင်ချေတွေကို ကြိုတင် ကာကွယ်ထားလို့ရတာပေါ့။
သင့်ဆိုင်ရဲ့တစ်နေ့တာ သုံးခဲ့တဲ့အသုံးစရိတ်ကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
Whoa POS မှာ မိမိဆိုင်ရဲ့တစ်နေ့တာအသုံးစရိတ်တွေကို ထည့်သွင်းမှတ်သားထားနိုင်ပါတယ်။ လချုပ်၊ နှစ်ချုပ်အသုံးစရိတ်တွေကို သိနိုင်တာကြောင့် စိစစ်ချွေတာနိုင်တာပေါ့။
သင့်ဆိုင်မှာအမြဲအားပေးနေတဲ့ ဝယ်နေကြဖောက်သည်တွေကိုရော သင်မှတ်မိနိုင်လား?
Whoa POS အရောင်းစနစ်မှာ ဝယ်နေကျဖောက်သည်တွေကို အဖွဲ့လိုက် (သို့) တစ်ဦးချင်းဆီ သေချာစွာ မှတ်သားထားနိုင်တဲ့စနစ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ပေးရန်ရှိ/ရရန်ရှိ ငွေစာရင်းများကို အတိအကျဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
Whoa POS အရောင်းစနစ်မှာ Supplier Contact, Customer Contact တွေကို တိကျစွာ ထည့်သွင်းထားလို့ ရပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် Supplier ထံသို့ ပေးရန်ရှိငွေ၊ Customer ထံမှ ရရန်ရှိ ငွေများကို တစ်ဦးချင်းဆီအလိုက် သီးသန့်ခွဲထုတ်သိနိုင်ပါတယ်။
သင့်ဆိုင်မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်း/ထုတ်ကုန်တွေရဲ့သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်အချိန်ကိုရော အတိအကျသိနိုင်ရဲ့လား? ပစ္စည်းအရေအတွက်များပြားလာတာနဲ့အမျှ အတိအကျသိနိုင်ဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲလေပါဘဲ။
Whoa POS အရောင်းစနစ်မှာ Expired Date သတ်မှတ်ထားနိုင်တာကြောင့် မရောင်းလိုက်ရဘဲ မိမိဆိုင်ရဲ့အမြတ်အစွန်း ရနိုင်ချေဆုံးရှုံးမှုတို့ကို သိလာနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အခြေအနေမှာသိနိုင်ဖို့ (သို့) အရောင်းပစ္စည်းတွေများလာတဲ့အခါ ဘယ်လိုမှမသိနိုင်ပါဘူး။
ဆိုင်ရဲ့ပစ္စည်းစာရင်းများကို အတိအကျသိနိုင်ဖို့ရော မစဉ်းစားတော့ဘူးလား?
လတ်တလောအခြေအနေမှာ ဆိုင်ရဲ့ပစ္စည်းစာရင်းများကို သိနိုင်ပေမဲ့ အချိန်ကြာလာတာနဲ့ အမျှ သိနိုင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ Whoa POS အရောင်းစနစ်ကို အသုံးပြုပြီး မိမိဆိုင်ရဲ့ ပစ္စည်း စာရင်းတွေ ကို တိကျစွာ မှတ်သားထားနိုင်ပါတယ်။
သင့်ဆိုင်ရဲ့တစ်နေ့တာ/ တစ်ပတ်တာ/ လစဉ် အရောင်း/ အဝယ်စာရင်းများကို ဘယ်လိုထိန်း ချုပ်သိနိုင်မလဲ?
Whoa POS အရောင်းစနစ်မှာ Report result တွေကို တိကျစွာဖေါ်ပြပေးနိုင်တဲ့ စနစ်တွေပါရှိ ပါတယ်
သင့်ဆိုင်ရဲ့ နှစ်ချုပ်စာရင်းရော သိဖို့မလိုဘူးလား?
ပုံမှန်အခြေအနေမှာ တိကျသေချာတဲ့ အရှုံးအမြတ်စာရင်းကို မသိနိုင်ပါဘူး။ Whoa POS အရောင်း စနစ်ကတော့ တိကျသေချာတဲ့ အရှုံးအမြတ်စာရင်းကို တွက်ထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
သင့်ဆိုင်ရဲ့ ပစ္စည်းအလဲစာရင်းကိုရော အတိအကျသိဖို့ မလိုဘူးလား?
ပုံမှန်အခြေအနေမှာဆို ပစ္စည်းအလဲစာရင်းက မသိနိုင်ပါဘူး။ သိမယ်ဆိုရင်လည်း လဲရမည့်စာရင်း အားလုံးကို တွက်မထုတ်နိုင်ပါဘူး။ Whoa POS အရောင်းစနစ်ကိုသုံးပြီး ပစ္စည်းအလဲစာရင်း၊ Sale return တွေကို သေချာစွာသိလာနိုင်ပါတယ်။
Whoa Retail POS မှာ retail ရော wholesale ရော အကောင့်တစ်ခုထဲကနေ တစ်ပြိုင်တည်း ရောင်းလို့ရပါသလား?
Cloud base system မှာတော့ အကောင့်တစ်ခုချင်းစီ သတ်မှတ်ပြီး တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲကနေ Control လုပ်ပြီး Retail & wholesale ကိုရောင်းချနိုင်ပါတယ်။ Offline အနေဖြင့်တော့ Acc တစ်ခု ချင်းစီ အနေနဲ့ အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Whoa Retail POS မှာ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ချင်းစီ Location တွေခွဲရောင်းလို့ရမလား?
ဟုတ်ကဲ့ Cloud base system မှာတော့ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ Offline system မှာတော့ တစ်ခု ချင်းစီဘဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Whoa Retail POS မှာ Inventory control system ကို centralize စနစ် အသုံးပြုလို့ရလား?
ဟုတ်ကဲ့ Online စနစ်မှ warehouse တစ်ခုတည်းကနေ Inventory control, stock control အနေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Offline အနေနဲ့ကတော့ အဆင်မပြေသေးပါဘူး။
သင့်ဆိုင်ရဲ့ နောက်ဖေးမီးဖိုချောင် အသုံးစရိတ်ကို အလေအလွင့်မရှိစေရန် အတိအကျ သိနိုင်ဖို့ မလိုအပ်ဘူးလား?
Whoa Restaurant POS မှာ Ingredient Feature စနစ်ကိုအသုံးပြုနိုင်တာကြောင့် ဟင်းတစ်ပွဲချင်းစီ ရဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်း (သို့) မီးဖိုချောင်ရဲ့ အသုံးစရိတ်တွေကို တိကျစွာတွက်ချက်ပေးနိုင် ပါတယ်။
သင့်ဆိုင်ရဲ့တစ်နေ့တာ အရောင်းစာရင်းကို အတိအကျ သိနိုင်ရဲ့လား?
Whoa Restaurant POS စားသောက်ဆိုင်သုံးစနစ်မှာ လက်ရှိ Manual သွားနေရတဲ့အခြေအနေမှာ အတိအကျသိနိုင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ တိကျသေချာတဲ့အရောင်းစနစ်တစ်ခုကို အသုံးပြုမှ သာလျှင် အရောင်းစာရင်းကို အတိအကျသိနိုင်ပါတယ်။
သင့်ဆိုင်ရဲ့ တစ်နေ့တာ အဝယ်စာရင်းကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲ?
မလိုအပ်တဲ့ဝယ်ယူသိုလှောင်မှုတွေမဖြစ်ရလေအောင် Whoa Restaurant POS စားသောက်ဆိုင် သုံးစနစ်မှာကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မိမိဝယ်ယူရမည့်စာရင်းတွေအတိုင်း သေချာစိစစ် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
သင့်ဆိုင်မှာ တစ်နေ့တာရဲ့ အရောင်းရဆုံး ပစ္စည်း ၊ ထုတ်ကုန်ကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
ပုံမှန်လက်ရှိအချိန်တွေမှာ မသိနိုင်ပါဘူး၊ Whoa Restaurant POS စားသောက်ဆိုင်သုံးစနစ်မှာ ကို အသုံးပြုပြီး အရောင်းရဆုံး Product, item စတာတွေကို အတိအကျသိရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Stock လက်ကျန်ကို အတိအကျ သိနိုင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
Whoa Restaurant POS စားသောက်ဆိုင်သုံးစနစ်မှာ မှာ Inventory control System ပါရှိတဲ့ အတွက် မိမိဆိုင်မှာရှိတဲ့ item lists အားလုံးရဲ့ stock လက်ကျန်တွေကို တိကျစွာသိရှိနိုင် ပါတယ်။
လက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ရင်းနှီးငွေကို ဘယ်လိုချိန်တွယ် သုံးစွဲမလဲ?
နေ့စဉ် အရောင်း အဝယ် စာရင်းတွေကို တိကျစွာသိရှိနိုင်တဲ့အတွက် မလိုလားအပ်တဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု တွေကို ရှောင်ကြဉ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ဆိုင်ရဲ့ တစ်နေ့တာ ရောင်းရငွေမှာ အမြတ်က ဘယ်လောက်လဲ?
Whoa Restaurant POS စားသောက်ဆိုင်သုံးစနစ်မှာ ဝယ်ဈေး ရောင်းဈေးှတွေကို မိမိကိုယ်တိုင် သေချာစွာ စိစစ်တွက်ချက်နိုင်တာကြောင့်တစ်နေ့တာ၊ လချုပ်၊ နှစ်ချုပ်တွေရဲ့အမြတ်တွေကို တွက်ထုတ် နိုင်ပါတယ်။
သင့်ဆိုင်ရဲ့ အရမ်းရောင်းမကောင်းတဲ့ အစားအသောက်စာရင်းတွေရော အတိအကျ သိရဲ့လား?
Whoa Restaurant POS မှာအပတ်စဉ်၊ လစဉ် အရောင်းစာရင်းတွေကို တိကျစွာဖော်ပြပေးနိုင်သော ကြောင့် အရောင်းရဆုံး စာရင်းတွေနဲ့ အရမ်းရောင်းမကောင်းတဲ့စာရင်းတွေကို report result တွေနဲ့ သိနိုင်ပါတယ်။
သင့်ဆိုင်ရဲ့ တစ်နေ့တာ သုံးခဲ့တဲ့ အသုံးစရိတ်ကို ဘယ်လို သိနိုင်မလဲ?